Kim Jong Un ‘oo isaga oo ilmeynaya qirtay’ guuldarro | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Kim Jong Un ‘oo isaga oo ilmeynaya qirtay’ guuldarro
Kim Jong Un ‘oo isaga oo ilmeynaya qirtay’ guuldarro
Hoggaamiyaha Korea-da Waqooyi Kim Jong Un ayaa u muuqday inay ilmo ka qubaneysay markii uu dhammaadkii toddobaadka la hadlay shacabkiisa, isaga oo uga mahad-celinaya naf hurnimada ay sameeyeen.
Inkasta oo Kim uu sii xajistay xukunkiisa dalka go’doosan, ayaa haddana dadka fallanqeeya siyaasadda Korea-da Waqooyi waxay sheegayaan in Kim u muuqday mid isu muujinaya inuu yahay hoggaamiye ka duwan aabihii Kim Jong Il.
Isaga oo ka hadlayey dhoola-tus militari Sabtidii, ayaa Kim waxaa qaaday dareen xilli uu ciidamadiisa uga mahd-celinayey jawaabtii ay ka bixiyeen musiibooyinka dabiiciga ah ee dalkaas, ayna ka hortageen faafitaanka cudurka Coronavirus.
Waxa uu sidoo kale shacabka uga cudur daartay inuu ku guul-darreystay inuu sare u qaado oo uu wanaajiyo heerka noloshooda.
“Xishoodka iyo daacadnimada uu muujiyey Kim, isaga oo ilmeynaya oo sixanaya, waxay ahaayeen kuwa aan caadi ahayn, xitaa marka loo eego qof si shaacsan u qiranaya guul-darooyinkiisa,” waxaa sidaas tiri Rachel Minyoung Lee, oo ah cilmi-baare madax-banaan iyo fallanqeeye hore oo arrimaha Korea-da Waqooyi u qaabilsaneyd dowladda Mareykanka.
“Khudbadda oo ay aheyd mid si taxaddar leh loo qaabeeyey si loola jaan-qaado shacabka, waxay ka dhigeysaa Kim mid u muuqda hoggaamiye karti iyo soo jiidasho iyo dhinac bani’aadannimo leh,” ayey tiri.
Kim ayaa culeysyada dhaqaale ee Korea-da Waqooyi ay wajaheyso wuxuu ku eedeeyey cunaqabateenada caalamiga ah ee saaran Korea-da Waqooyi, cudurka Coronavirus, iyo dabeylo iyo daadad is xig-xigay oo dalkaas ku habsaday.
Previous articleIsrael oo kasoo horjeesatay in Mareykanka uu Qatar ka iibiyo diyaaradaha dagaalka ee F-35
Next articleRa’iisul Wasaaraha oo Beesha Caalamka kala hadlay habsami-u-socodka hannaanka doorashooyinka
Golaha Dhaqanka Beelaha Hawiye oo war kulul ka soo saaray Xariga Koneel Ismaciile
Gaashaanle ismaaciil Cabdi Maalik Maxaa lagu haystaa ??
Baniga Aduunka oo lacag Badan ugu Deeqay Soomaaliya
Shirka maanta ugu Firmi lahaa magaalada Muqsisho madaxweynaha ...